Lalindalina Kokoa Noho Ny Hoditra Ny Fibahanana ny “Burkini” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2016 3:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, عربي, Nederlands, Italiano, Română , 日本語, English
Ahitana ny iray amin'ireo fanehoana voalohany fantatra amin'ny bikini, ilay sary ao amin'ny trano ntaolo Romana ‘Romana del Casale’ (286–305 AD) ao Sicile . SARY: Sehatra ho an'ny daholobe
Eo anelanelan'ny hotakotaka amin'ilay fibahanan'i Frantsa ankehitriny ny fanaovana “akanjo mampiseho mibaribary ny fivavahana”, mbola ny lafiny diso amin'ny tantara indray no ifantohantsika: ny vokany, fa tsy ny antony. Ary mino aho fa mihoatra lavitra ny fivavahana na ny kolontsaina ny “antony”. Fahasamihafàna kely etsy ankilany, zavatra izay tena fahita mahazatra manerana ireo firenena sy ny kolontsaina io, izay efa nisy hatramin'ny taonjato maro.
Vao mainka ilay fandraràna nohamafisin'ilay sary mahamenatra malaza be amin'ny Aterineto, ahitàna polisy manery vehivavy iray teny amin'ny morontsiraka tany Nice, Frantsa, hanala ny ampahan'ny burkini-ny. Noho izany, amin'ity fotoana ity eo am-bavam-basy, tenenina indray amin'ireo vehivavy nt fomba tokony ataony mba tsy hampisy fanilikilihana azy ireo, amin'ny fampietrena ny anjara asantsika eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akanjo anaovantsika, na tsia.
Ary raha toa moa ka, tsy miezaka ny hamaritra ny fomba fitafy tsy maintsy anaovan'ny vehivavy isika, fa manandrana mitaiza ireo tovolahy sy lehilahy kosa mba hahay hanaja ireo vehivavy tsy miankina amin'izay bikany, ny lokony na ny akanjo anaovany? Ary raha ampiasana mba hisorohana sy hanasaziana ny fanaovana sotasota ara-nofo eny an-dalana ny hery laniana amin'ny fanamafisana ireo fandraràna, na amin'ny adihevitra hoe azo ekena ho mariky ny fitiavana an'Andriamanitra ve ny voaly, na hoe fihantsiana ve ny fanavahana ireo vehivavy ?
Ary raha toa ka manomboka tsaraintsika amin'ny alalan'ireo zavatra ataony sy ireo hevitra lazainy ny toetr'ireo vehivavy fa tsy tsaraina hoe “maotina”, “fanaja” na “janga” amin'ny alalan'ny akanjony? Ary raha toa ka miato noho ny fahatohinana isika rehefa mahita ireo vehivavy mampinono eny imasom-bahoaka? Ary raha toa ka manatsahatra ny fanasiana boaty mainty eo amin'ireo nonontsika ny Facebook? Ary raha hoe lavintsika amin'izay, ny tsy hanaovana ireo vehivavy ho toy ny zavatra any anatin'ireo dokambarotra sy gazetibokinà lamaody?
avy tamin'ny GIPHY
Ary raha toa ka ampiasaina tsara sy marina amin'ny fisorohana ny herisetra ao an-tokatrano, ireo ezaka tohanan'ny fanjakana mba hampisehoana ny “fanomezan-tokiny” ho amin'ny fanajana ny zon'ireo vehivavy?
Mety hoe raha milamina kokoa sy azo antoka eny an-dàlana mba ho azon'ireo vehivavy andehanana an-tongotra, mety tsy ho tsapan'izy ireo ny filàna—na hoe voatery amin'ny tranga sasany — hisaron-doha. Raha toa ka azo antoka sy milamina ny eny an-dàlana, afaka manao safidy samirery tsara mikasika ny akanjony ireo vehivavy, ary tsy hisy olona hanome tsiny azy ireo.
Mety hoe raha toa isika tsy miraharaha loatra ireo marika sy zavatra eny amin'ny akanjo, mba afaka manomboka miasa hanatratra ny atao hoe tena fiiaraha-miaina marina isika.
Tena mampalahelo sy mampiahiahy ihany koa ny mahita ireo ankolafy rehetra mampiasa ny kolontsaina, fomban-drazana, ary ny fivavahana indrindra indrindra, hatao mpisolo vaika ny ankalana, kanefa ny tena olana tsy misy idiran'ireo mihitsy fa mikasika ny faniriana mafin'ny fiarahamonina manontolo hifehy ireo vehivavy. Mamàka lalina ao an-dohantsika ireo hevitra hatrizay momba ny zavatra azo ekena sy tsy azo, hany ka tonga amin'ny teboka ireo vehivavy ankehitriny izay inoantsika — ary aidiantsika mihitsy aza — ny hevitra hoe manao safidy tokoa isika. Fa tena manao izany tokoa ve isika?
Soa ihany aho tsy miaina anatinà firenena iray ilàna ny fahatahorana lava hoe sao misy polisy tonga avy aoriako sy manome lamandy ahy na mahita ahy tsy dia maontina sy feno fanaraham-pivavahana tsara, na koa hoe manaboridana ahy amin'ny anaran'ny fanafahana. Fa mbola mieritreritra in-droa momba izay akanjo hitafiako ihany anefa aho rehefa mampiasa ny fitateram-bahoaka, na mandeha an-tongotra manoloana toeram-panorenana iray, satria mitombo ny tahan'ny mety hisian'ny mpanao antsojay amiko raha manao karazana safidy aho. Noho izany, azoko tsara ny faniriana na finiavana ho tsy dia ho hitan'ny olona loatra mba hialàna amin'ireo vokadratsy tsy niriana. Ary na tsy Silamo aza aho —na hoe mpivavaka —manohana tanteraka ireo rahavaviko amin'ny voaly aho.
Mamintina ny olana ito lahatsoratra Facebook nataon'i Demonio Blanco ito, olana antsoiny hoe “purplewashing” (fanafenana ny fihetsehampo tsy ahazoana aina, ka isehoana ho toy ny faly sy sambatra eny imasom-bahoaka amin'ny filàna bàla hanatsaràna ny zavatra iray hafa):
Fomba entina milaza ny fampiasàna ny fanomezan-danja ny vehivavy ho fialantsiny amin'ireo fihetsika tsy azo leferina toy ny tsy fitiavana Silamo ny hoe purplewashing.
Raha toa ianao manahy kokoa amin'ilay vehivavy mpanao fanatanjahantena manao voaly noho ireo ambiny manao “bikini” kely, na hoe mampiasa io karazana fakantsary io ny mpanao gazety mpaka sary [volley-ball eny amoron-dranomasina akaiky be], tena mety purplewashing izany.
Raha toa ianao mankahala ny “reggeaton” satria io manindahindra ny fahamboanian'ny lehilahy, kanefa tsy mankahala ny Los Planetas (tarika indie Espaniola), toa tena purplewashing izany.
Ry vehivavy misarom-boaly na manao bikinis, izay mandihy “punk” na “twerk”: samy mpirahavavy daholo isika ary samy manozongozona ny fahambonian'ny lehilahy araka ny fahitàny azy.
Raha tena miahiahy amin'ny famoretana iaretanay ianareo, manaova zavatra amin'ny fampiatoana ireo namanareo rehefa manao anay ho toy ny zavatra izy ireo any amin'ny trano fisotroana, na rehefa manao ny fanolanana ho toy ny hanihany izy ireo.
Tsy azo ekena ny mahita fotsiny ny fahadisoana eny amin'ny hafa.
Noho izany, inona no anaovanay raha toa ka tsy misy lalànan'ny fivavahana, raha toa izahay tsy nila niasa saina tamin'ny fijerin'ireo hafa sadaikatra, momba ny herisetra sy ny sary raiki-tammpisaka tsotra izao? Inona no safidy mety ataonay raha toa izahay tsy nobeazina hahatsapa tena momba ny vatanay na isay mety ho vokany?
Amin'ny fiompanana amin'ny fandraràna ny burkini, fa tsy hoe amin'ireo fanitsakitsahana isak'izay mandeha ireo zon'ny vehivavy amin'ny firesahana ny tantaranà akanjo iray fitondra milomano ; mba tena manao zavatra misy dikany tokoa ve isika?